Ukuzivalela ngenxa ye-Coronavirus kungayiphazamisa ingqondo - Ilanga News
Home Impilo Ukuzivalela ngenxa ye-Coronavirus kungayiphazamisa ingqondo
Ukuzivalela ngenxa ye-Coronavirus kungayiphazamisa ingqondo
KUNOKWESABELA ukuthi isimemezelo sikaMengameli waseNingizimu Afrika, uMnu Cyril Ramaphosa sokuvala izwe izinsuku ezi-ngu-21 kusukela kusasa ngoLwesihlanu, njengenye yezindlela zokunqanda ukubhebhetheka kwegciwane iCOVID-19, kungaba nomthelela ongemuhle ongadala ukuphazamiseka kwengqondo.
Odokotela bezengqondo baqagula ukuthi isimo esingesihle sempilo, kulandela ukubhebhetheka kwaleli gciwane nemigomo ethize ebekiwe ukuzama ukulinqanda – njengokuzivalela ezindlini izinsuku ezingu-21 kungagcina kunomthelela wengcindezi no-mzwangedwa kubantu.
Udokotela wengqondo (Clinical Psychologist) waseThekwini, uNozibusiso Nyawose, uthe nakuba kuqikelelwa ukuzinakekela ngokwezempilo kodwa kumele ungashalazelwa umthelela waleli gciwane engqondweni yabantu.
Uthe nakuba uhulumeni eqinisekisa ukumisa abantu idolo nokukhipha ulwazi mayelana nezindlela zokuzivikela, kodwa lokho akwanele ngoba iqiniso elimsulwa wukuthi abantu basovalweni.
“Kuyiqiniso ukuthi kumele sehlise amaphaphu kodwa kakulula ngoba iningi linetwetwe lokungazi ukuthi ikusasa liphetheni. Okunzima kakhulu wukuthi kasibhekene nalolu bhubhane siyiNingizimu Afrika kuphela kodwa kunamanye amazwe akhahlamezekile kakhulu yilona, okwenza lokho (kukhahlamezeka) sikubuke kuseduze futhi okwenza abaningi bahlalele ovalweni,” esho.
UNkz Nyawose uthi ngesikhathi abantu bezivalele ezindlini ngalezi zinsuku, kunganda izinga lemi-khuba engemihle eyenziwa ngabantu njengokuphuza ngokweqile, udlame nokuhlukumeza. “Kunabantu abangakwazi ukuhlala endaweni eyodwa, abangagcina bezizwa bempintshekile bagcine sebenodlame. Lokhu kungabenza babe nenhliziyo encane balwise izingane nabahlala nabo kungenasidingo,” esho.
Ugcizelele ukuthi nakuba kunjalo kumele abantu baqikelele ukuthi bashaywa wumoya futhi bathola umsoco welanga, bangazigqumi ezindlini kakhulu. Umsoco welanga ubalulekile ukukugcina ungumqemane, uqinisa amasosha omzimba, ukwenze ulale kahle nasebusuku.
Lokhu kufakazelwe nguzakwabo uMnu Kwanele Thusi oyiPsychologist eRhodes University, othe abanye banokwesabela “ukushi-ntsha” kwempilo ejwayelekile ephoqa ukuba abantu bazivalele. “Kunabantu abahlala ngabo-dwana okuzoba nzima kubona ukungaxhumani nabanye. Kuphinde kube khona abantu abakho-nze ukuba ngabodwana okuzophoqeleka ukuba bahlale nabantu,” esho.
Uthi ukugwema ukwesaba netwetwe kumele abantu besamukele isimo, bazame nezindlela ezingabagcina bematasa.
Kulabo abahlala nabantwana, kumele basebenzise lesi sikhathi baqinise ubudlelwano ngoku-hlala kuxoxwe, kukhuthazwe ukufunda noma ku-dlalwe imidlalo ehlukene ezobagcina bematasa.
“Abantwana banemibuzo eminingi ngakho abazali kumele bazinike isikhathi sokubaphendula futhi babaphendule ngokweqiniso.
“Kumele lesi sikhathi kube ngesokufundisa izingane ngalesi simo nezizathu eziholele ukuba wonke umuntu agcine esevaleleke ekhaya.
“Lesi sikhathi makube ngesokuzifundisa ukubaluleka kwenhlanzeko njengemiyalelo kahulumeni nokungazuli,” kusho uMnu Thusi.
Unxuse ukuba bangavalelwa ngaphandle nalabo abahlala ngabodwana, wakhuthaza ukuba abangani nezihlobo baxhumane ngayo yonke indlela, bangazizwa benomzwangedwa.
Previous articleIFitFanatic ithi masizivalele sizivocavoce
Next article‘Ubuhle bukwenza ubukeke sengathi awunangqondo